महाराजगञ्जमा सडक संकेत बत्ती सञ्चालन
Admin | २०७५-०६-२६ | १३१० ११
यसको प्रभाव हेरेर विस्तार योजनामा महानगर
शिक्षण अस्पताल अगाडि उद्घाटन गरिएको पैदल यात्री संकेतमा हरियो बत्ती बलेपछि सडक पार गर्दै मेयर शाक्य, वडाध्यक्ष के. सी., ट्राफिक प्रहरी अधिकृतसँगै सर्वसाधारण
काठमाडौं । काठमाडौं चक्रपथ खण्डमा पर्ने महाराजगञ्ज चोकमा नेपाली प्रविधिमा निर्माण गरिएका सडक संकेत बत्ती सञ्चालनमा ल्याइएको छ । महानगरले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गराएको प्रणालीको रिमोट, शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रममा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार लम्साललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्यस लगत्तै मेयर शाक्यले शिक्षण अस्पताल अगाडि निर्माण गरिएको पैदल यात्रु संकेत बत्ती
को शुरुवात् गर्नुभयो । यो प्रणाली निर्माण गर्न ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
विकास व्यवस्थापनका लागि सबै अधिकार महानगरमा आइ पुगि सकेका छैनन् । महानगरभित्रका ठूला सडकको निर्माण, मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन सडक विभागको जिम्मामा छ । प्रणाली शुरु गरिसकेपछि बोल्दै मेयर शाक्यले भन्नुभयो — नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा तथा सुविधा मिलाउन महानगरले कार्य क्षेत्र मात्र हेरेर हुँदैन । सडकमा संकेत बत्ती राख्ने विषय पनि यस्तै हो । मूल सडकमा यातायात प्रणालीलाई सहज बनाउने जिम्मेबारी विभागकै हो तर विभागबाट यसमा पर्याप्त काम नभएपछि महानगरले काम गरेको हो । महानगरको वडा ३ स्वास्थ्य सेवाका दृष्टिले उर्वर छ । ठूला ठूला अस्पताल भएका कारण त्यस क्षेत्रमा सवारी र पैदल यात्रीको यात्रा सहजता मिलाउनु पर्छ, वडाध्यक्ष दीपक के. सी. ले विरामीलाई प्राथमिकतामा राखेर पैदल यात्रीलाई सहजता प्रदान गर्ने प्रणाली विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहन्छ — मेरो वडामा राष्ट्रिय स्तरका ५ वटा अस्पताल छन् । ती अस्पतालमा आउने विरामी र विरामीका आफन्तको आवातजावत सहज बनाउन पैदल मार्ग र सवारी आवागमनको सन्तुलन मिलाउनै पर्छ । अहिले मेरो ध्यान त्यसैमा केन्द्रीत छ । वडा ३ मा महाराजगञ्ज चो, बसुन्धरा, सामाखुशी र तिलिङ्टार गरी ४ वटा ठूला सडक चोक छन् । महाराजगञ्जको प्रणालीबाट प्राप्त प्रभाव हेरेर वडासँगै सहरका अन्य ठूला चोकमा विस्तार गर्ने महानगरको योजना रहेको, सहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख राम थापाको भनाइ छ ।
महाराजगञ्जमा निर्माण गरिएको संकेत बत्तीमा सवारी साधनका लागि ९० सेकेण्ड र जेब्रा क्रसिङ् प्रयोग कर्ताका लागि १५ सेकेण्ड समय कायम गरिएको छ । तारविहिन नेपाली प्रविधिमा जडान गरिएको प्रणालीमा बत्तीसँगै क्यामरा पनि जोडिएका छन् । ती क्यामराले १०० मिटरसम्मका सवारीलाई (क्लोज अप) नजिकबाट निगरानी र तिनका गतिविधि रेकर्ड गर्न सक्छन् । बत्तीहरु अटो र म्यानुअल दुवै तरिकाबाट चलाउन सकिन्छ । दिनको समयमा अटोमा राखेपछि एउटै समय तालिकामा आवागमन चल्छ भने बिहान वेलुकी सवारी साधन कम चल्ने बेलामा पैदल यात्रीले स्वीच थिचेर सडक पार गर्न सक्छन् । प्रयोगकर्ताले स्वीच थिचेको १० सेकेण्डपछि हरियो बत्ती बल्छ ।
महाराजगञ्च चोक काठमाडौंका व्यस्त चोकमध्येको एक हो । सडकबत्ती जडान गर्ने क्रममा यार्सा टेक्नोजोलीले दिनको ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म राखेको तथ्याङ्कमा त्यस १ घण्टाको अवधिमा ८०० वटा मोटरसाइकल, १२० वटा बस, २२० वटा कार र २१५ वट ठूला बस, ट्रक तथा मालबाहक सवारी गुडेका थिए । यो समय चापहुन अघिको समय हो । त्इस चोकमा ४ बजेपछि र ७ बजे अघिको समयमा सवारीको अत्याधिक चाप हुने गरेको छ ।
चौपाया अनुगमनमा तीब्रता Previous Post
काष्ठमण्डप पुननिर्माण समितिलाई महानगरको थप ५ करोड Next Post